ဖောက်သည်များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုစီအတွက်ပစ်မှတ်ထားသောရှေ့ဆုံး UX ကိုမောင်းနှင်ရန် Paywizard နှင့် Massive Interactive လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် | NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Paywizard နှင့် Massive Interactive လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်အဓိကဖောက်သည်များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုစီအတွက်ပစ်မှတ်ထားထားသော front-end UX ကိုမောင်းနှင်ရန်ဖြစ်သည်
Paywizard, စာရင်းသွင်းထားသော, ငွေတောင်းခံခြင်းနှင့်ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးဟာစီမံခန့်ခွဲမှု (CRM) အထူးကု, ယနေ့နှင့်အတူသစ်တစ်ခုနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းကြေညာလိုက်ပါတယ် ကြီးမားတဲ့ Interactive မှ, multiscreen ဗီဒီယိုကန်ဆောင်မှုများအတွက်ပစ်မှတ်ထားအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများကိုအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ။ အဆိုပါပူးပေါင်းပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်ဖောက်သည်ခရီးအတွက်ရှစ်သော့ချက် '' ဆုံးဖြတ်ချက်ခဏ '' မှာစာရင်းသွင်းသူများနှင့်ချုပ်ယင်း UI ကိုပစ်မှတ်ထားဖို့ကြွယ်ဝတဲ့ဒေတာကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် analytics သုံးစွဲဖို့အော်ပရေတာကို enable တော်မူမည် Find, Join, လောင်, Upgrade, Downgrade, ဘီလ်, Leave နှင့်ဦးဝင်းသို့ပြန်သွားရန်။
"အချိန်အတိအကျမှာ, ဖြောင့်ကမ်းလှမ်းမှုများ, အကြံပြုချက်များ, ပရိုမိုးရှင်းများနှင့်အကူအညီများတိကျတဲ့အသုံးပြုသူများတင်ပြကြသည်ရှိရာတစ်ဦးကိုပစ်မှတ်ထားအတွေ့အကြုံကိုပေးသဖြင့်, အော်ပရေတာ "သူတို့ကိုအများဆုံးသက်ဆိုင်ရာသောဝန်ဆောင်မှုဖြေရာယဇ်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကိုထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ် Bhavesh Vaghela, Paywizard ရဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်။ "Paywizard နှင့်ကြီးမားတဲ့ယခုလျာထားသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ (UX) ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမယ့်ခေတ်မီလုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အတူ Over-ထိပ် (OTT) အော်ပရေတာပေးနိုင်ပါသည် - ။ နောက်ဆုံးတွင်အသုံးပြုသူတစ်ဦးလျှင်ပျမ်းမျှအဝင်ငွေတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းလျှော့ချနေစဉ်အတွင်းပိုကောင်းဖောက်သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသေချာ"
Ron Downey, အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့်ကြီးမားတဲ့၏တွဲဖက်တည်ထောင်သူ, ဖြည့်စွက်: "ရဲ့ကြီးမားတဲ့ '' segment Tags: '' နှင့်အတူ Paywizard ရဲ့အလိုလိုသိ '' ဆုံးဖြတ်ချက်ခဏ '' ဒိုင်ခွက်ပေါင်းစပ်ပြီးအားဖြင့်ကျနော်တို့ UI ကိုတဆင့်လူကြီးမင်းအသုံးပြုသူများကိုထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အော်ပရေတာဖွတဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါကအမ်းအမ်းစာရင်းပေးသွင်းထားသူတစ်ဦးထက်ပိုသောသင့်လျော်သောအထုပ်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သော Pre-empting အလွန်အမင်းအဖြစ်ပံ့ပိုးပေးသဖြင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်အသုံးအများဆုံးစိန်ခေါ်မှုများအချို့ကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ "
သစ်ကိုပေါင်းစပ်ဖြေရှင်းချက်မှတဆင့်အော်ပရေတာကြီးမားတဲ့ဝင်ရိုးမှတဆင့် segment Tags: အသုံးချနိုင်ပါလိမ့်မည် - စာရင်းပေးသွင်းထားသူဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်အရောင်းအဝယ်အပြုအမူအပေါ် Paywizard ရဲ့သွက်လက်ပလက်ဖောင်းနှင့် တွဲဖက်. နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအတွက် - ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး UX ထုတ်ကုန်ပစ်မှတ်ထား။ သွက်လက်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ခဏဒိုင်ခွက်ကနေကြွယ်ဝသောထိုးထွင်းသိမြင်မှု, တစ်ဦးစာရင်းပေးသွင်းထားသူတစ်ဦး Pay ကိုတီဗီဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်အခါထို့နောက်သူတို့၏ကြည့်ရှုခရီးအတွက်ဖောက်သည်တစ်ဦးရဲ့စင်မြင့်ပေါ် မူတည်. ကြီးမားတဲ့ဝင်ရိုးမှတဆင့်ရှေ့ဆုံး UI ကိုတစ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ခြေရာခံ။ ဤသည်အသေးစိတ်အချက်အလက်မောင်းနှင် personalization အော်ပရေတာ, ဖောက်သည်ရှာမှီးခြင်းနှင့် retention ကိုတိုးမြှင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားဖြစ်အောင်မြင်ရန်နှင့်အသုံးပြုသူ (ARPU) နှုန်းပျမ်းမျှအားဝင်ငွေတိုးမြှင့်ဖို့ခွင့်ပြု, ဖောက်သည်ရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်ထို့ကြောင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအားကောင်းစေ။
တစ်ဦးပံ့ပိုးပေး-စာရင်းပေးသွင်းထားသူကြားဆက်ဆံရေးများ၏ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုဒြပ်စင်အများဆုံး OTT န်ဆောင်မှုများအတွက်အရေးအကြီးဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားဖြစ်လာသည်။ ကာရလဒ်အဖြစ်တသမတ်တည်းအပြုသဘောဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုပေး - ပါ - စာရင်းပေးသွင်းထားသူဆကျဆံရေးအပျေါဖြစ်တဲ့ Fatal သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်ယခုနှစ်အစောပိုင်းက Paywizard ထုတ်ဝေသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသုတေသနဖောက်သည်တစ်ဦးနားလည်သဘောပေါက်ရန်ပျက်ကွက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဝက်ဖို့နီးကပ်သူတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိုကဲ့သို့သောဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အာရုံစူးစိုက်မှု, ဦးစားပေး၏နားလည်မှုအဖြစ်အပြုသဘောအချက်များ၏ရပ်စဲစဉ်းစားစာရင်းသွင်းခြင်းထိန်းသိမ်းထားခဲ့စဉ်စစ်တမ်းကောက်ယူ 6,200-ပေါင်းစားသုံးသူများ၏လေးပုံတစ်ပုံ, ဆင်းရဲသောဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကို၏ရလဒ်အဖြစ်ဒစ်ဂျစ်တယ် Pay-TV ကိုဝန်ဆောင်မှုကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည် , ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ-On အကြောင်းအရာအကြံပြုချက်များအသုံးပြုမှုနှင့်အထုပ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြောင်းလဲမှုများတုံ့ပြန်။
"- နှင့်တစ်သမတ်တည်းအပြုသဘောဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူဒေတာ-မောင်းနှင်ဆက်ဆံရေးကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများယူခြင်းပိုကောင်းနားလည်ပြီးတွေ့ဆုံရန်သူတို့ရဲ့ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်များနှင့်အပြုအမူမှအော်ပရေတာဖွ" Vaghela မှတ်စု။ "အော်ပရေတာမှမရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်း data ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပို, ပိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကသူတို့အကြီးအကျယ်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်နိုင်သည့်တစ်ဦးထက်ပိုသောပစ်မှတ်များနှင့်သက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ, ဖန်တီးနိုင်ကြသည်ကြောင်းဖြစ်၏။ "
Downey ဖြည့်စွက်: "Paywizard နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက် Pre-empt အပြုအမူတွေမှအော်ပရေတာခွင့်ပြုမယ့်စုစုပေါင်းပလက်ဖောင်းဖြေရှင်းချက်ကယ်တင်တတ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏စုပေါင်းကျွမ်းကျင်မှုပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ, ဒီ segment နှင့်ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းချက်သူတို့ရဲ့ဖောက်သည် '' ခရီးနှင့်အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားအတွက်သော့ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအချိန်လေးတစ်ခု In-depth အမြင်, ရှေ့တစျခုခြေလှမ်းဖြစ်ခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းလျှော့ချဖို့အလားအလာနှင့်အတူအော်ပရေတာပေးပါသည်။ "
IBC 14 မှာ Paywizard တဲ (32.F14) နှင့်ကြီးမားတဲ့တဲ (20.B2017) မှဧည့်သည်များသစ်ကိုဖြေရှင်းချက်၏ပူးတွဲတင်ဆက်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျပြပွဲမှာသရုပ်ပြ booking အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလျှင်, နှိပျပါ ဒီမှာ။
2017 CES2017 CRM IBC ကြီးမားတဲ့ Interactive မှ multiscreen paywizard က Ultra HD ဖိုရမ် virtual reality 2017-08-31
ယခင်: IBC 2017 at Amino: Upcycling - မနက်ဖြန်အတွက်တီဗီကိုပြောင်းလဲရန်သော့ချက်
နောက်တစ်ခု: DNF Ensemble Designs '' BrightEye NXT Router အတွက် IP-အခြေပြုထိန်းချုပ်ရေးကမ်းလှမ်း